Inona no tena mampiavaka an'i Jesosy - Fiangonan'Andriamanitra Soisa manerantany
haino aman-jery > Journal succession > 2016-01 mpandimby ny Magazine > Inona no mampiavaka an'i Jesosy?
Andro vitsy lasa izay, raha nandeha nody avy niasa aho, dia nahita dokambarotra teny amin'ny arabe nampiroborobo ny famoahana lahatsoratra tamin'ny gazety ankehitriny. Hoy ny peta-drindrina: "Mandela dia Jesosy". Tamin'ny voalohany dia nahataitra ahy ity fanambarana ity. Ahoana no ahafahan'ny olona milaza zavatra toy izany! Olona miavaka i Mandela, fa azonao ampitahaina na ampitoviana amin'i Jesosy ve izy? Na izany aza, nahatonga ahy hieritreritra ity afisy ity. Ankoatra an'i Mandela, olona manokana maro no niaina teto an-tany. Tao anatin'ny 100 taona lasa fotsiny dia nisy olona toa an'i Mahatma Gandhi, Martin Luther King Jr. ary Nelson Mandela, izay, toa an'i Jesosy, niaina tsy fahamarinana, nandresy ireo sakana toa tsy voavaha ary nahazo laza iraisam-pirenena mihitsy aza. Ny tsirairay tamin'izy ireo dia nijaly tamin'ny fombany avy. Nokapohina, notanana, norahonana ary nampitahorina, ary novonoina mihitsy aza izy ireo. Raha ny momba an'i Gandhi sy Martin Luther King Jr., dia samy nandoa ny ainy tsirairay avy. Ka inona no mampiavaka an'i Jesosy? Fa maninona no kristiana mihoatra ny roa tapitrisa no manompo azy?
Jesosy dia tsy nanana ota
Na i Gandhi, na i Martin Luther King Jr., na i Nelson Mandela, dia samy tsy nihambo ho tsy nisy ota mihitsy. Kanefa ao amin’ny Testamenta Vaovao dia maro no mijoro ho vavolombelona fa i Jesosy dia maniry ny hanana fifandraisana akaiky amintsika; fa tsy misy olon-kafa manao na afaka milaza ny zava-misy fa Jesosy tsy nanota. In 1. Petrus 2,22 azontsika vakiana hoe: “Izay tsy nanota sady tsy nisy fitaka teo am-bavany” ary ao amin’ny Hebreo 4,15 « Fa isika tsy manana mpisoronabe izay tsy mahazaka ny fahalementsika, fa efa nalaim-panahy tamin’ny zavatra rehetra tahaka antsika, nefa tsy nanota. Lavorary i Jesosy ary tsy mba nanota mihitsy toa an’i Mandela sy ny hafa.
Jesosy nilaza fa Andriamanitra
Na i Gandhi, na i Martin Luther King Jr., na i Nelson Mandela, dia samy tsy nilaza ny tenany ho Andriamanitra, fa i Jesosy no nanao izany. 10,30 “Izaho sy ny Ray dia iray ihany” ary manondro an’Andriamanitra mihitsy izany. Izany no antony naniry ny hohomboana Azy ny Jiosy.
Nisy olona hafa teo amin'ny tantara, toa an'i Augustus Kaisara sy ny Mpanjaka Nebokadnetsara, izay nilaza fa masina. Saingy ny fitondran'izy ireo dia tsy nasiana fiadanam-po, fitiavana ary toetra tsara amin'ny olona, ​​fa nampahory sy nanisy lolompo ary nitady fahefana. Mifanohitra tanteraka amin'izany, misy ny manaraka an'i Jesosy, izay tsy mikatsaka ny hahatonga azy ho malaza, manan-karena sy mahery, fa hitondra ny olona fitiavana an'Andriamanitra sy ny vaovao mahafaly amin'ny alalàn'i Jesosy Kristy ihany.
Hamarininny fahagagana sy faminaniana
Ao amin’ny Asan’ny Apostoly 2,2223 Izao no nosoratan’ny apostoly momba ny Pentekosta: “Ry lehilahy Isiraely, mihainoa izao teny izao: Jesosy avy any Nazareta, izay nasehon’Andriamanitra teo aminareo tamin’ny asa sy ny famantarana ary ny famantarana izay nataon’Andriamanitra tamin’ny alalany teo aminareo, araka ny fantatrareo ihany, Io lehilahy io, izay nomena teo noho ny fikasan’Andriamanitra sy ny fitarihany, dia nohomboanareo tamin’ny hazo fijaliana sy novonoinareo tamin’ny tanan’ny jentilisa.” Eto i Petera dia miresaka amin’ireo olona mbola nahafantatra an’i Jesosy manokana. Hitan’izy ireo ny fahagagana nataony ary nisy tamin’izy ireny mihitsy aza angamba teo rehefa nanangana an’i Lazarosy, namahana lehilahy 5000 (tsy anisan’izany ny vehivavy sy ny zaza), nandroaka fanahy ratsy ary nanasitrana ny marary sy ny mandringa. Olona maro koa no nanatri-maso ny fitsanganany tamin’ny maty ary afaka nijoro ho vavolombelona momba izany. Tsy lehilahy fotsiny izy. Tsy niteny fotsiny izy fa nanao zavatra araka ny teniny. Na dia eo aza ny teknolojia maoderina amin’izao andro izao, dia tsy misy afaka mahatakatra ny fahagagana nataon’i Jesosy. Tsy misy olona afaka manova ny rano ho divay, manangana ny olona amin'ny fahafatesana, ary mampitombo ny hanina. Na dia tena mahavariana aza ireo zavatra rehetra ireo, ny zava-misy hitako fa tena manaitra indrindra amin’ireo fahagagana nataon’i Jesosy dia satria faminaniana 700 mahery no hotanterahin’ny Mesia ary i Jesosy dia nahatanteraka ny tsirairay tamin’izy ireo. Ireo faminaniana ireo dia natao mihoatra ny arivo taona talohan’ny nahaterahany. Mba hahatakarana marina ny maha-zava-dehibe ny nahatanterahan'i Jesosy ireo faminaniana ireo, dia tsy maintsy mijery fotsiny ny mety hisian'ny statistika fa misy olona manatanteraka ireo faminaniana rehetra ireo. Raha jerentsika ny mety hisian’ny olona hahatanteraka ireo faminaniana 300 ambony momba an’i Jesosy, dia tokony ho 1:10 eo ho eo ny mety ho izy; (Iray misy aotra 157). Vitsy dia kely ny vintana nahatanterahin’i Jesosy ny faminaniana rehetra ka toa tsy ho vita mihitsy izany. Ny hany fanazavana ny fomba nahatanterahan’i Jesosy an’ireo faminaniana rehetra ireo dia ny hoe Izy mihitsy no Andriamanitra ary nitarika ny zava-nitranga.
Maniry ny hifandray akaiky amintsika olombelona i Jesosy
toa an'i Gandhi, Martin Luther King Jr., ary Mandela dia nanana mpanaraka maro, saingy tsy afaka nifandray tamin'izy ireo ny olon-tsotra. I Jesosy kosa dia manasa antsika hanana fifandraisana manokana aminy. Ao amin’ny Jaona 17,2023 Hoy izy: “Tsy ho anao irery no angatahako, fa ho an’izay mino Ahy koa noho ny teniny, mba ho iray ihany izy rehetra. Tahaka Anao Ray ato amiko, ary Izaho ao aminao, dia tokony ho ao amintsika koa izy, mba hinoan'izao tontolo izao fa Hianao no naniraka Ahy. Ary nomeko azy ny voninahitra nomenao Ahy, mba ho iray izy, tahaka ny maha-iray antsika, ary Izaho ao aminy, ary Hianao ato amiko, mba ho iray tanteraka izy ka hahalala izao tontolo izao, satria Hianao no naniraka Ahy sy tia azy. ahoana ny fitiavanao ahy."
Tsy hain'i Mandela, satria misy aho dia tsy afaka manao an'io koa. Rehefa dinihina tokoa, olombelona ihany izy. Saingy ny tsirairay amintsika dia afaka mahazo fifandraisana amin'i Jesosy. Azonao atao ny mizara aminy ny fanirianao, fifalianao, tahotrao ary ny fanahianao lalina indrindra aminy. Tsy enta-mavesatra ho azy ireo ary tsy ho reraka na be atao loatra hihaino azy ireo izy. Jesosy dia mihoatra noho ny olona manan-danja rehetra niaina teto satria tsy olombelona ihany fa Andriamanitra koa.
Na dia teo am-piandohan'ity lahatsoratra ity aza dia toa nampitahaina tamin'i Jesosy i Mandela, hitantsika fa tsy azo atao izany. Azontsika atao ny mampitaha an'i Mandela amin'i Gandhi sy Martin Luther King Jr., fa tsy amin'i Jesosy, satria izany no ahafahantsika mampitaha ny rano indray mitete amin'ny ranomasina. Tsy afaka mampitaha olona amin'i Jesosy ianao satria tsy misy mitovy aminy. Satria tsy misy olona miavaka toa azy.